Iingcaphuno ezivela kuBetty Friedan, uMsunguli woMfazi noMlobi
UBetty Friedan (1921-2006)
UBetty Friedan , umbhali we -Feminine Mystique , wancedisa ukuqala umdla omtsha kumalungelo amabhinqa, debunking inkolelo yokuba bonke abasetyhini abaphakathi babenelisekile kwinxaxheba yokwakha abantu. Ngo-1966, uBetty Friedan wayengomnye wabasunguli abaziintloko beSizwe soBamakhosikazi (MANJE).
Iikopi zeBetty Friedan ezikhethiweyo
• Umfazi ukhubaze ngesondo sakhe, kunye noluntu olukhuselekeni, mhlawumbi ngokukopisha ngempembelelo iphambili yomntu kwimisebenzi, okanye ngokungafuni ukukhuphisana nomntu.
• Indlela kuphela yowesifazane, njengendoda, ukuzifumana, ukuzizi njengomntu, ngumsebenzi wobugcisa. Ayikho enye indlela.
• Umntu akayilo intshaba apha, kodwa elinye lixhoba.
• Xa wayeka ukuhambelana nomfanekiso oqhelekileyo wobufazi, ekugqibeleni waqala ukuzonwabisa ukuba ngumfazi.
• I-mystique yamfazi iye yaphumelela ekungcwabeni izigidi zabantu baseMerika bephila.
• Uhlobo olulodwa lomsebenzi ovumela umfazi onamandla ukuba aqonde ngokupheleleyo amandla akhe, ukufikelela ekuzileni kwintlalo kwisicwangciso sophelo esingabandakanya umtshato kunye nonina, luhlobo olwenqatshelwe yi-mystic yamfazi, ukuzimisela okuze kube nzima kwi-art okanye isayensi, kwezopolitiko okanye kwezobugcisa.
• Kulula ukuhlala ngomnye umntu kunokuzigqiba.
• Intombazana akufanele ilindele ilungelo elikhethekileyo ngenxa yesini sakhe kodwa akufanele ilungelelanise nokubandlulula nokucalulwa.
• Ingxaki engenawo igama - okuyiyo nje into yokuba abafazi baseMerika bayagcinwa ekukhuleni ukuya kumandla abo apheleleyo - kuthatha ixabiso elikhulu kakhulu kwimpilo yengqondo kunye nengqondo yelizwe lethu kunanoma isiphi isifo esaziwayo.
• Omnye umfazi wamadolophini wayenomdla kunye naye. Njengoko wayenza imibhede, atyunjwa ngokutya, afanelana nezinto zokubhukuda, wayidla i-sandwiches ebhotela ebantanini kunye nabantwana bakhe, abaCube Scouts kunye neBrowny, balala eceleni kwendoda yakhe ebusuku - wayesaba ukubuza yena ngokwakhe umbuzo ongenanto - "Ngaba le konke? "
• Akukho mfazi ofumana i-orgasm ekukhanyeni ekhitshini.
• Esikhundleni sokuzalisekisa isithembiso se-orgasmic bliss engapheliyo, isondo kwi-America ye-mystique yamfazi iyaba yinyanzeliso engaqhelekanga yesizwe, ukuba kungenjalo ukunyeliswa.
• Kuyinto ekhohlakeleyo ukuxelela amantombazana ukuba athule xa bengena kwintsimi entsha, okanye umntu omdala, ngoko amadoda angayi kuqaphela ukuba ikhona. Intombazana akufanele ilindele ukuba amalungelo akhethekileyo, ngenxa yesini sakhe, kodwa akafanele "ahlengahlengise" ukubandlulula nokucalula.
• Amadoda ayengeyena intshaba - ayengamaxhoba athathwe ngumntu ongenamntu omdala owawenza ukuba bazive bengenasidingo xa kungekho zimbombo zokubulala.
Iingxaki ezintsha ezintle zichazwa kwizizukulwana ezikhulayo zabantwana abanomama ababehlala belapho, bebajikeleza, babancedise ngemisebenzi yabo yasekhaya - ukungakwazi ukunyamezela intlungu okanye ukuqeqeshwa okanye ukuphishekela nayiphi na injongo ekuzimeleyo yoluphi na uhlobo, inzondo ephazamisayo nobomi.
• Akunjalo ukuba ndiyekile ukuba ngumfazi, kodwa abafazi njengelinye iqela elichaphazelekayo abayikukhathazeka kwam.
• Ukuba isahlukaniso senyuke ngeepesenti eziliwaka, musa ukugxeka inxaxheba yabasetyhini. Gweba iimbopheleleko zesondo ezingapheli apho imitshato yethu isekelwe khona.
• Ukuguga kuyakudala umculo wekhulu elizayo.
• Unokubonisa okungakumbi into yakho endaweni yokubamba emva kwemaski ngenxa yokwesaba ukutyhila kakhulu.
• Ukuguga "akulahlekelwa ngumntwana" kodwa isithuba esitsha samathuba namandla.
• Kanye nje ngokuba bumnyama kuthiwa ngekho ukungabikho kokukhanya, ngoko ubudala buchazwa ngokungabikho kolutsha.
• Yinkalo eyahlukileyo yobomi, kwaye ukuba uya kwenza ngathi ulutsha, uya kulikhumbula. Uyakuphoswa ngokumangalisa, amathuba, kunye nokuziphendukela kwemvelo esaqala ukuyazi malunga nokuba akukho mizekelo yendima kwaye akukho zikhokelo zesikhokelo kwaye akukho zibonakaliso.
• Njengoko sisondela kwiminyaka eyiwaka leminyaka, ndiyamangaliswa kukuba ndibe yinxalenye yentlangano engaphantsi kweminyaka engamashumi amane ishintshe isizwe sase-Amerika-kangangokuthi namhlanje abantwana abaselula abakubonakala bengenakukwazi ukukholelwa ukuba abafazi babesakuba kubonwa njengalingana namadoda, njengabantu bebodwa.
• U- Elizabeth Fox-Genovese , umbhali-mlando obalaseleyo ondiqinisekanga ukuba uyithwesa intombikazi, wathi kutshanje ukuba akuzange kwimbali ukuba iqela liguqule iimeko zabo kuluntu ngokukhawuleza njengoko kwintsebenziswano yamanamhlanje aseMerika.
Iingcaphuno ngoBetty Friedan
• UNicholas Lemann: "Ubunqunu buhlukeneyo kwaye buphikisana, kodwa, ekubonakalweni kwayo kwangoku, kwaqala ngomsebenzi womntu oyedwa: uFriedan."
• U-Ellen Wilson, ngokuphendula kuFriedan's Isigaba sesiBini : "UFriedan uthe ngokuqinisekileyo ukuba abafazi bafanele bavumelane nomoya ongenamqondo ngentsapho kunye nokushiya umkhuba wethu wokuhlalutya nokugxeka."
Izibonelelo ezinxulumene noBetty Friedan
UBetty Friedan - Biography
I-Rally Ukulinganisa kwiVolleyball